အဘယ်သူ၏ဘဝတွေကိုရုပ်ရှင်အခန်းကဏ္ဍပြီးနောက်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွားကြသည် 11 သရုပ်ဆောင်များကို
အခြားရုပ်ရှင်အကဲခတ်, လူအနည်းငယ်က၎င်း၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏သမိုင်းဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူရငျဆိုငျသည့်သရုပ်ဆောင်များကိုအဘယ်အရာကိုစဉ်းစားပါ။ ကြယ်ဘဝ၏အချို့ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အခန်းကဏ္ဍပြီးနောက်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။
ဘဝကဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွအလင်းနှင့်အပူအပင်ကင်းပြီးကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားအခန်းကဏ္ဍခက်ခဲစို့နှင့်ဂိမ်းဒီတော့အသက်ရှည်သမျှသိသိသာသာပြောင်းလဲလာကြောင်းစုပ်ယူသည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်ရန်အသုံးပြု Get ။ သငျသညျလူသိများတဲ့သရုပ်ဆောင်များကို၏အစစ်အမှန်ဥပမာကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ဒီအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။
1. Isabelle Adjani - "Obsessed နဲ့"
လူအများစုဟာရဲ့ဘဝတွေကိုထိတ်လန့်ဇာတ်ကားတွေကြောင့်ထိခိုက်ခြင်း, ဥပမာအားဖြင့် 1981 ခုနှစ်တွင်သိမ်းယူ, ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အန္န play ရန်, မင်းသမီးသူမ၏အခွအေနေအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုတွေအများကြီးကွိုးစားအားထုခဲ့ရတယ်။ Adjani, အင်တာဗျူးအတွက်နောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာပစ်ခတ်မှုဟာအိမ်တွင်းပုန်းဘဝကိုဦးဆောင်, သူကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဖြုန်းခဲ့ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်သူမသည်ဘယ်တော့မှနောက်တဖန်ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များတွင်အခန်းကဏ္ဍများအတွက် audition လိမ့်မည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။
2. Tom Cruise နဲ့ - "မျက်လုံးကျယ်ပြန့်မပိတ်"
မေတ္တာပါစုံတွဲ Tom Cruise နဲ့နီကိုးလ် Kidman Stanley Kubrick ပါရမီအားဖြင့်တစ်ဦးရုပ်ရှင်များတွင်ကစားရန်မေးတဲ့အခါ, သူတို့ကအတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါပစ်ခတ်မှုအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူအသီးအသီးဇာတ်စင်ဒါရိုက်တာအမှားကတည်းကပိုထက်တစ်နှစ်ကြာခဲ့သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၎င်းချစ်သူများမကြာခဏငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ကြသည်မှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းအတွက်အဆုံးသတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
အသစ်ကအခန်းကဏ္ဍအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်, မင်းသမီးအပူတပြင်းအစီအမံကိုသွားခဲ့ရတယ်: သင်၏ဦးခေါင်းကိုပစ်နှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့တစ်တင်းကြပ်တဲ့အစားအစာပေါ်မှာထိုင်။ သူမမျှတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကြောင့်သူမသည်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုအမှန်တကယ်စိန်ခေါ်မှုခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကြယ်ပွင့်ကြောင့်သူမ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရာအဖြစ်မှန်နှင့်အတူထိတွေ့ဆုံးရှုံးဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်။ အမ်းအချိန်ကြာမြင့်စွာရိုက်ကူးပြီးနောက်စနစ်တကျန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဟုဆိုသည်။
4. မင်းသား Hugh လော်ရီ - "အိမ် MD"
ဂရိတ်ဘုန်းအသရေကိုဗြိတိသျှရုပ်ရှင်မင်းသား, ခြေဆွံ့သောအဓိကချစ်ပ်များ၏တဦးတည်းမှောင်မိုက်ဆရာဝန်၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ (သေနတ်ပစ်ကြာကဲ့သို့) သူကသူ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်သောရှစ်နှစ်တစ်အားလျော့ဖော်ကျူးခဲ့, ဒါကြောင့်သူကသူ့ဒူးအတွက်နာကျင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့လော်ရီနေ့စဉ်အသက်တာ၌အားလျော့ခဲ့ရတယ်။ မိမိအခွအေနအေသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့သူရံဖန်ရံခါအားနည်းခဲ့တော်မူသောခြေထောက်, ပြောင်းလဲသွားတယ်, ဒါပေမယ့်သူကမကူညီခဲ့ဘူး။
5. Heath Ledger - "The Dark Knight ဟာ"
အဆိုပါ Joker ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်သရုပ်ဆောင်များ၏ပွိုဂိမ်းကိုသူတစ်ဦးအော်စကာဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည့်အဘို့အမြင့်ဆုံးရမှတ်များအတွက်ပရိသတ်တွေနှင့်ဝေဖန်သူများကအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကမကွယ်လွန်ပြီးမှပေးထားခဲ့သည်အတိုင်း, သင်တို့၏လက်၌ကိုင်ရန်ပျက်ကွက်မင်းသားမှဆုချီးမြှင့်ခံထိုက်။ လယ်ဂျာမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ အတော်များများကရုပ်ရှင်ဂိမ်းအပေါငျးတို့သအမှားကြောင်းယုံကြည် "The Dark Knight ဟာ။ " အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ပစ်ခတ်မှုအထီးကျန်နေထိုင်ခဲ့မတိုင်မီထိအရူးလူများ၏ကမ္ဘာကြီးနားလည်ရန်, ငါဒိုင်ယာရီထားရှိမည်နှင့်သူ့အဘို့မသစ်ကိုပြည်နယ်ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်။ ရလဒ်အနေနဲ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အိပ်မပျော်ကိုက်အခဲပျောက်ဆေး, Anti-စိတ်ကျရောဂါနှင့်အိပ်ပျော်နေသောဆေးပြားများအသုံးပြုခြင်းမှဦးဆောင်ရသောရှိ၏။ မင်းသား၏ဒိုင်ယာရီထဲမှာနောက်ဆုံးအ entry ကိုအချက်ကိုအားဖြင့်ကြောက်လန့် - "။ Bye, နုတ်ဆက်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ
6. Brandon Lee က - "ကျီး"
မင်းသားအဘို့အ fatal ဟာသိသိသာသာရုပ်ရှင်များတွင်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာ, တစ်ဦးအလွတ်သည့်အရာတစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့်, တိုက်ဆိုင်မှုအသုံးပြုပုံကျည်ဆံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်နှင့် Brandon ဆိုက်ပေါ်မှာ right အနိစ္စရောက်လေ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တကယ်တော့ - မင်းသားသူအထက်မှသေသောနောက်, ကျဆင်းသွားရသောကာလအတွင်း, တူညီတဲ့အဆင့်တွင်ကစားရန်အချိန်ရှိခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒါဟာပြီးသား Brandon Lee က၏မျက်နှာကို "ချမှတ်ခဲ့" ဟုအဆိုပါစည်းဝေးပွဲကိုစဉ်အတွင်းသူ၏မျက်နှာပေါ်တွင်အခြားသရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ ဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဤအမျိုးအစားသေလွန်သောသူတို့သည်သရုပ်ဆောင်များကို "ပြန်လည်ရှင်သန်" ဖို့, အခြားဇာတ်ကားတွေအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
7. Keanu Reeves - "အဆိုပါ Matrix"
အများကြီးအဖြစ်ဆိုးနဲ့ဆက်စပ်လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကားများထဲမှနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်ပင်ကဲ့သို့သောအရာထထင်ခဲ့တာ "ဟုအဆိုပါ Matrix ၏ကျိန်ခြင်း။ " ဥပမာအားဖြင့်, ရိဗ်ပထမဦးဆုံးသူငယ်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအသေကောင်ကိုမွေးဖွားလာ, ပြီးတော့သူမကိုယ်ကိုအသေခံခဲ့သည်။ မင်းသမီး၏ဘဝအသက်တာကနေ Gone, Z ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ရိုက်ကူးရေးလပေါင်းများစွာနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။ နီးပါး Keanu ကိုယ်တော်တိုင်ဦးသေဆုံးခဲ့ရသောအခြေအနေမျိုးတောင်ပေါ်မှာတစ်ဦးဆိုင်ကယ်ပေါ် crashing ရှိ၏။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်သူက "ကျိန်စာ Matrix" အချိန်ကြာမြင့်စွာသူ့ကိုသရဲခြောက်တယ်လို့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ရှင် Keanu ၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းသူတစ်ဦးကြီးများဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာပြီးဒါကြောင့်သူကအဆိုးမြင်စိတ်တွေအားလုံးကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဂါထာနှင့်မီးလောင်သောနံ့သာပေါင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ site ပေါ်တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအချိန်မှစ. အများအပြားရိဗ် "အနက်ရောင်သိုး" မှတ်ခြင်းငှါလာကြပါပြီ။
8. Shelley Duvall - "အဆိုပါတိုက်"
Shelley အစစ်အမှန်စမ်းသပ်သွားခဲ့ရသည်အားလုံးအချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်များကိုတစျဦး၏ရိုက်ကူးရေးစဉ်အတွင်း။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကသူ့ကိုဦးနှောက်အာရုံကြောပျက်ပြားဘို့ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်ထိုကာလ၏မြင်ကွင်းတစ်ခုအမျိုးသမီးကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပြန်ဖွင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသောကြောင့်ဥပမာ, ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့မင်းသမီးအျောဟစျသံနှင့်အတူအချို့သောမြင်ကွင်းတစ်ခု, ဆောငျ, ဒါပေမယ့်ဦးနှောက်အာရုံကြောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၏ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်မခံခဲ့ရပါဘူး။ အင်တာဗျူးမှာတော့သူမဟာပစ်ခတ်မှုမှာတစ်နှစ်နီးပါး လာ. , သူမ 12 နာရီတစ်နေ့အဘို့အော်ဟစ်ခဲ့အကြောင်းကိုကိုးလကပြောသည်။ Shelley ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါခံစားခဲ့ရနှစ်အနည်းငယ်ရိုက်ကူးပြီးနောက်, ရလဒ်အဖြစ်။
9. ဂျော်နီ Depp - "Las Vegas မှာကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်ရွံမုန်းတဲ့"
မင်းသားစာရေးဆရာနှင့်သတင်းစာဆရာ Hunter အက်စ် Thompson က၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆင်းသက်ပြီးနောက်သူဂရုတစိုက်သူ၏အသက်တာနှင့်အမူအကငျြ့ဆနျးစစျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ဒါပင်မြေအောက်ခန်းထဲမှာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ပွိုဂိမ်း Depp သင်္ဘောသားသူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှိမရှိသံသယဝင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခဲ့ "အက်ဆစ်။ " ဂျော်နီ၏ပြီးစီးပေါ်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာငါသည်သူ၏သူရဲကောင်း၏ထုံးစံဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ဘူး, မိမိသတ်သေမတိုင်မီ Thompson ကအတူမိတ်ဆွေများကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အလေ့အထများနှင့်မတည်မငြိမ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေတဲ့ပါရမီသရုပ်ဆောင်များ၏အသက်တာ၌များစွာသောပြဿနာများကိုစေ၏။
10. Adrien Brody - "အဆိုပါ pianist"
မဟုတ်ရင်သူကဒါကြောင့်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရခံစားခဲ့ရပါပြီမဟုတ်ဘူးကြောင့်, မိန်းကလေးနှင့်အတူအများဆုံး၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖို့အသုံးပြုရဒါအရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် (တိုက်ခန်းကားကိုရောင်း, ဖုန်းပိတ်ထား), နှင့်ပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှ - အဆိုပါသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်အစားအစာများ၏ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အပ်ပေးတော်မူ၏။ သူကအချိန်ကြာမြင့်စွာပစ်ခတ်မှုစိတ်ကျရောဂါနှင့်သံသယ၌ရှိ၏ပြီးနောက်အရူးကိုသွားစရာမလိုဘဲ, သာမန်ဘဝပြန်သွားဖို့ရှိမရှိကြောင်းသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ recover လုပ်ဖို့, Brody တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲယူခဲ့ပါတယ်။
11. Janet Leigh - "Psycho"
အဲဖရက် Hitchcock ရဲ့ကမ္ဘာ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခွက်တဆယ်ကိုကျေးဇူးတင်လူသတ်သမားစိတ်ပညာသရုပ်ပြသောအစွန်းရောက်ရုပ်ရှင်ကိုငါမြင်၏။ သားကောင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားခဲ့သူမင်းသမီးများအတွက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, သူရဲကောင်းဓားဒဏ်ရာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိသတ်သောတစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခု, တစ်ပါတ်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ မိမိအအင်တာဗျူးမှာတော့ Lee ကသူမ "Psycho" တွင်အလုပ်အပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းဝံ့, ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းရှပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တံခါးကိုကြည့်ရဲ့။ ဝန်ခံ
ပယင်း Heard Vito Schnabel နှင့်အတူအချိန်သုံးစွဲ
မင်းသား Johnny Depp ရုပ်ရှင် "Labyrinth" ၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်တစ်ဦးရန်ပွဲကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါကြိုးစားခဲ့
ဂျော်နီ Depp အစောင့်တရားရုံးတွင်သူ့ကိုတရားစွဲ
ချစ်သောရော်နယ်ဒို Georgina Rodriguez အကြောင်းကို9စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ
21 တောက်ပဝင်စား Allison တဗိသ kospleershi
သင်ရုံမသိရနာမည်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 73 မသိသောဖြစ်ရပ်မှန်များ
အောင်မြင်တဲ့ပလပ်စတစ်ရာ၌ခန့်ထားပြီသူကို 12 ကြယ်များ
အသစ်က "ကာရစ်ဘီယံ၏ Pirates" အကြောင်းကို 13 အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များ
Shock! "ဟာသ" မင်းသားချားလ်စ်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ၏စိတ်နှလုံးဖဲ့
တစ်ခုမှာ - ကောင်းသော, ဒါပေမယ့်နှစ်ခု - ပိုကောင်း: 20 ကြယ်အမွှာပြုစုပျိုးထောင်
ဗီရိုထဲမှာအရိုးစု: 10 Jackson ကမိသားစုလျှို့ဝှက်ချက်များ
၏ထိပ်တန်း 25 ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်
ကွဲပြားခြားနားသောလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့်အတူမိဘများဆောင်ခဲ့သော 13 ကြယ်
Bob Dylan 20 ခန့်အချက်အလက်များ, သင်မသိရပါဘူး
Abdominoplasty ဝမ်း - လှပသောခန္ဓာကိုယ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး
Rhubarb - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ကလေးတွေအတွက်က Hip dysplasia - ရောဂါလက္ခဏာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Oligohydramnios: အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ
ယိုလိမ္မော် - မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာချက်ပြုတ်နည်းများ Citrus ရယူထားသော
ဂျုံယာဂု Nestle က - ထိုအကွာအဝေး
မျိုးပွား hydrangeas ရှ
အိုးပေါကျကှဲစကတ် - တစကတ်-ခွနှင့်အတူ 80 ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံကိုပုံရိပ်များ
Gerard Depardieu ရုရှားနိုင်ငံရှိသူ၏အိမ်ခြံမြေအတူတက်ဖဲ့
သင့်လျော်သော Capricorns အဘယ်အရာကိုကျောက်ခဲတို့ကိုရှိပါသလဲ